कोरोनाविरुद्ध लड्न भारतले नेपाललाई दियो भेन्टिलेटरसहितको ३९ एम्बुलेन्स « Jagaran News
Published On : 22 April, 2021 3:46 pm
काठमाडौँ, बैशाख ९ । यति बेला विश्व नै कोरोनासँग लडिरहेको छ । विभिन्न चुनौतीसँगै यो महामारीको भाइसरसंग जुधिरहेका छन् विभिन्न देशहरु , यस मध्य एउटा देश हो नेपाल । कोरोनाको दास्रो लहरले अहिले नेपालमा पनि जोखि बढेको छ । यता यसमा लड्नका लागि भारतले नेपाललाई विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणहरु सहयोग गरेको छ ।
बिहीबार भारत सरकारले कोरोना महामारीविरूद्ध लड्नका लागि ३९ वटा एम्बुलेन्स, भेन्टिलेटर, ईसीजी, अक्सिजन मोनिटर र अन्य आपतकालीन चिकित्सा उपकरणहरु सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई उपहार स्वरूप प्रदान गरेको नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।
त्यस्तै दूतावासले ६ वटा स्कूल बसहरू पनि सहयोग गरेको छ । दूतावासले विद्यार्थीहरूको सहज पहुँचका लागि स्कूल बसहरु सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । यसअघि पनि भारतले नेपाललाई स्वास्थ्य उपकरणहरु सहयोग गरेको थियो । छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोनाले दिनकै नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ ।
चार महिनामा विपदजन्य घटनामा १५६ जनाको मृत्यु, ३७ जना वेपत्ता
काठमाडौं, साउन २४ । गत बैशाख महिनायता विपदमा परी १५६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
टोकियो ओलिम्पिक्स आज सम्पन्न हुँदै , कुन देशले कति पदक जिते ?
काठमाडौं , साउन २४ । टोकियो ओलिम्पिक्स आज सम्पन्न हुँदैछ । पछिल्लो पदक तालिकामा आइतबार
कोभिशिल्डको पहिलो मात्र लगाएकालाई भोलिदेखि दोस्रो डोज दिइने, तोकिए १४४ केन्द्र
काठमाडौँ, साउन २४ । काठमाडौँमा कोरोना भाइरसविरुद्धको कोभिशिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएकालाई भोलिदेखि दोस्रो मात्रा
आज सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौँ, साउन २४ । साताको पहिलो दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा १ हजार ५
एक महिनासम्म पनि सकेनन् देउवाले मन्त्रिपरिषद बनाउन
काठमाडौं, साउन २४ । । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको एक महिना